Akanaka kupfuura ese ekare maguta muEurope | Absolut Kufamba
Akanaka kupfuura ese ekare maguta muEurope
Alberto Makumbo | | Alemania, España, France, Italia
Vanoda nhoroondo vanowana iyo medieval nguva, kana iyo iri yeMiddle Ages, imwe yeinonyanya kufadza kana zvasvika pakunakidzwa nezuva retsika kushanya. Kana iyi iri kesi yako, saka zvirokwazvo iwe uchafadzwa kunge mwana kuburikidza neizvi maguta akanaka epakati pekare muEurope.
1 Carcassonne (Furanzi)
2 Bruges (Bherujiyamu)
3 Avila (Spain)
4 Siena (Italy)
5 Nuremberg (Jerimani)
Inofungidzirwa imwe yeiyo akachengetedzwa zvakanakisa maguta ekuMiddle Ages muEuropeCarcassonne akarara kumaodzanyemba kweFrance, kunyanya mudunhu reOccitania, ichiratidza mukana unotanga neakareba madziro, ayo anogadzira ayo anozivikanwa Citadel. Kubva pamusuwo neano ngano Gedhi reNarbonneIcho hunyengeri kurasika mune netiweki ye labyrinthine alleys anoratidzira mifananidzo senge Comtal castle, inokodzera firimu reDisney, kana Cathedral reSt. Nazaire. Iyo yakaoma inopatsanurwa nerwizi Aude uye yakasarudzwa Nhaka yehupenyu neasco muna 1997 izvo iwe haugone kupotsa kana chinhu chako chiri chekufamba kudzoka munguva kuburikidza nekushanya.
Anosungirwa kushanya munzira yako kuburikidza neguta reBrussels, Varoyi (ane zita rekutanga anonzi Bryggia, kana "mabhiriji", achireva huwandu hwenzvimbo dzenzizi dzaanadzo), inofadza njere. Guta rakaziviswa World Heritage Site uye akazvarwa muzana ramakore regumi nerimwe iyo, kunyangwe ikashanduka shanduka, yakashandurwa ikaitwa neo-gothic maitiro muzana ramakore reXNUMXth kuitira kuremekedza zvachose aesthetics yeguta rekare. Usapotsa kushanya kune yengano Belford bhero shongwe kana Cathedral yeMuponesi usati watora chikepe uye kurasika mumakorari mazhinji ayo anoyambuka ichi chidiki "Venice yekumaodzanyemba".
Pamahombekombe erwizi rweAdaja, Avila anoenderera mberi nekuvandudza mamiriro ayo seguta risingapokaneke medieval yenyika yedu kubvira 1131 metres kumusoro, chinzvimbo chinopa iyo yakatonyanya epic hunhu. Yakatorwa nevaRoma, maVisigoths nemaMuslim kusvika pakukundwa kwayo nevaKristu muzana ramakore regumi nerimwe, ilavila yaive nzvimbo yakakosha yekushanya mukushanya muzana ramakore rechiXNUMX nekuda kwekuvapo kwaSaint Teresa waJesu, uyo aizoenderera achikudza simba reguta rakatsanangurwa rusvingo rwayo rukuru, rwakachengetedzwa zvakanyanya muSpain. Mukati, hapana chinhu chiri nani pane kuyemura mifananidzo senge hombe, kereke yeGothic uye yechinyakare yemaitiro aya, pamwe nemufananidzo wePaza del Mercado Chico kana Chechi yeSan Pedro.
Kubwinya kweTuscany kunowana muSiena mumiriri wepakati nepakati medieval weItari wese. Guta rinotenderera a Piazza del Campo uko kwaimboitwa nhangemutange dzemabhiza ane mukurumbira anonzi Palio, uye ane maonero anotaridzika anosanganisira zvivakwa senge Torre del Mangia, akakwirira kwazvo muguta, kana anokwezva Veruzhinji Muzinda. Guta rekare rinonaka uko kuzevezera kweimwe nguva kuchiri kufemerwa uye izvo zvinotitungamira kune kune mukurumbira Duomo, inozivikanwawo seKathedral yeSanta María de la Asunción, yakazivisa World Heritage Site uye yakanaka yekuongorora akasiyana mabasa akapendwa naMichelangelo.
Inofungidzirwa se guta rechipiri pakukura muBavaria kuseri kweMunich, Nuremberg ibwe repakati nepakati iro raimbove nemadzishe akakurumbira eMweya Mutsvene weRoma. Inofungidzirwa seimwe remaguta anoona kwazvo munhoroondo sezvazvinofungidzirwa yekutanga Yemahara Imperial Guta Mugore re1219, Nuremberg nhasi iratidziro yemhando yepamusoro yekutenda kwayo kune dhorobha rekare rakakomberedzwa nemadziro emakiromita mashanu. Mukati iwe unogona kuwana mifananidzo senge iyo Kaiserburg, kana muzinda wamambo, ane Sinwellturm (kana Torre del Pecado) inopa maonero asingakundike, famba mumigwagwa yayo yeEuropean fairytale dzimba kana kunovanda Muurayi Bridge parwizi Pegnitz.
Nyika yechokoreti inowana muBern rimwe remapapu akajeka kwazvo epakati pekare muEurope. Guta rakayamburwa nerwizi rweAare rwunogadzira mhete yakatenderedza guta rayo rekare, mufaro wakasarudzika World Heritage Site muna 1983 uye iyo yakakomberedza nzvimbo dzakakurumbira sedzakakurumbira wachi shongwe, yakavakwa pakati pezana remakore rechiXNUMX nerechiXNUMX, iyo arcades (kana nhevedzano yemabhedhi) ayo anoumba chikamu chehurongwa hwayo, matsime ayo anonakidza kana gothic maitiro kedhedral akaberekwa kubva kuimba yekare yeRoma. Ehezve, kudya chaiko chokoreti iwe uchirasika mumigwagwa yayo kwakanyanya kune chisungo pane zano. Pasina mubvunzo, rimwe remaguta ekare akanaka kwazvo muEurope.
Kufanana nechimwe chinhu chinobva munganonyorwa yekare yeNorse, guta guru reEstonia nderimwe remaguta ekare anoshamisa muEurope, kunyanya mumwedzi yechando apo chando chinoshandura nhare dzaro nemigwagwa kuita mamiriro akasarudzika. Yakatarisana neGulf yeFinland, Tallinn yakabuda sechiteshi chekare chekutengesa kudzamara yakava nzvimbo yetsinga mukati meMiddle Ages, mamiriro aripo mu Guta rekare rakakamurwa kuita nzvimbo mbiri: Vanalinn, chikamu chezasi, uye Toompea, chikamu chepamusoro. Kupatsanurwa kuri kweguta rekare rakavakirirwa rine rakakurumbira Town Hall Square uye Town Hall Shongwela Viru Gedhi kuyambuka neshongwe mbiri huru kana maberere anoumba iyo Kupfuura kwaSanta Catalina, cobbled artery iyo inotora mushanyi kupinda muchivande, yakasarudzika nyika.
Yakagadzirwa nezvikamu zviviri zvakaparadzaniswa nemapindu ePrincess Street (guta rekare rinogadzira medieval nhare, uye nyowani yakatanga kubva muzana ramakore rechiXNUMX), Edinburgh ndiro guta guru rekare reUnited Kingdom. Guta rine mucherechedzo mukurusa nhare yake, iyo inogona kuwanikwa kuburikidza neCalton Hill, kuwedzera kune dzimwe nzvimbo dzakadai se Chaperi yeSanta Margarita, chivakwa chakare kwazvo muguta, kana icho Royal Palace, chapupu chakanakisa chepfuma nezvishongo zvemhuri dzakasiyana dzekorona yeScotland. Sechido chekuda kuziva, iwe unozowanawo chikamu chemufananidzo weGreek Parthenon iyo isina kumbopedzwa nekuda kwekushomeka kwebhajeti, ichikwanisa kuwana gumi nembiri.
Nderipi remaguta akaisvonaka kwazvo ekare muEurope raungade kurasika? Wakamboshanyira chero?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Akanaka kupfuura ese ekare maguta muEurope